GENDER LINE 2081 – Pann Satt Lann Books
“ဒီဝတ္ထုမှာတော့ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်ပဲ ။ ၂၀၈၁ မှာကမ္ဘာမြေကို ကျွန်တော့သဘောနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ခြမ်းခွဲပစ်လိုက်တယ်။ တစ်ခြမ်းမှာ ယောက်ျားတွေချည်းသီးသန့်နေကြ။ တစ်ခြမ်းမှာ မိန်းမတွေချည်း သီးသန့်နေကြ။ ဘာဘာညာညာကိစ္စတွေလည်း အဆင်ပြေသလိုလုပ်ကြပေါ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာ အချင်းချင်းရှိလို့ ရှိမှန်းတောင် မသိကြတော့တဲ့ အခြေအနေကို ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးဟာ သူဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဟော့ဒီ့ကမ္ဘာက လူတွေကို မနိုင်တော့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်လည်း ဟော့ဒီဝတ္ထုကို ရေးနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ မနိုင်တော့ဘူး။ ဒီထဲမှာပါတဲ့ ဘဲတွေ စော်တွေ၊ ဂေးတွေ၊ လက်စ်ဗီယန်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ တသီးတခြား ကမ္ဘာတွေကနေ သူတို့လုပ်ချင်ရာလျှောက်လုပ်ပစ်ကြတော့တာ။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ Gender Line 2081 ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။” စာအုပ်နောက်ကျောဖုံးမှ စာရေးသူ၏အမှာစကားကို ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်…။ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ဆန်းဆန်းပြားပြားနှင့် အတွေးအမြင်သစ်များပေးစွမ်းနိုင်မယ့် စာအုပ်များ ဖတ်ရှုလိုသူတို့အတွက် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်…။
5.5 x1 x 8.1 inches
ငါတို့စာပေ၊ 2020ဇန်နဝါရီလ၊ (ပ-ကြိမ်)
GENDER LINE 2081 အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု3ရှိပါသည်။
Naing Lynn Aung – October 26, 2020
သရော်စာအုပ်ဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်နဲ့ပါ ။ စာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ပြောထားခဲ့သလို သူ့ဇာတ်ကောင်တွေ သူမနိုင်တော့တာ အမှန်ပါ အကုန် လုပ်ချင်ရာတွေ လုပ်ကုန်ကြလို့ပါ ???။
ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပီး အတွေးသစ်လေးတစ်ခု ရလိုက်တာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုတောင် အကောင်းဆုံးဟုတ်ရဲ့လား တကယ်ရော လူတိုင်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ကိုက်ညီသင့်တော််ပါ့မလား ဆိုတာပါပဲ။ ဖတ်ရှု့ပီးတဲ့အခါ တွေးစရာတစ်ခုတော့ကျန်ခဲ့မဲ့စာအုပ်ကောင်းပါ။
I received this book asagift from my best friend. Gender Line 2081 was written by ဗြိတိသျှကိုကိုမောင် who also wrote The Guys Of Rangoon 1930, with the nickname Khett Zaw, another book I enjoyed greatly. Through careful inspection I can see the similarity in the prose between the two books, namely in the narration and overall humor.
Gender Line 2081, isatotalitarian, Orwellian novel, cleverly written and embedded with meticulously cultivated humor from ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်. It felt like Easter, hunting for all the the little literary Easter eggs in the book. My favorite one has to be the first line of the book, paralleling with the first line of the French classic by Albert Camus, The Stranger. From then on the book has consistently putasmile on my face.
The book shifts point of views consistently, beginning from the female’s perspective, then the male’s, then the LGBD’s. Multiple characters in the book take center stage asaprotagonist throughout the book, which made the reader connect deeply to these characters as the narrative takes off. Although some of the political parties and scientific breakthroughs in the novel and their issues are clearly made for laughs, like all great science-fictions, made me think of my own place in suchafuture. The many different protagonists of the novel, have different tastes, different relations, different ideals and worldviews, different past experiences, different education and differentiated by various age groups, which add more depth to the book in my opinion. Depending on the character that you are reading, it felt like you were readingadifferent book all-together, woven together by an enormous, moving narrative. If you’re science-fiction buff, my advice to you would be to forget critiquing the possibilities and enjoy the book, because in it’s essence I can see the author is just having an amazing time writing this book, glittering it full of jokes to poke fun at our current reality.
My only complaint would be the ending. I felt like the ending was rushed and ambiguous, but not inaway Murakami does it, cleverly and meticulously. The whole tale was building up to an epic, grand final battle of sorts, and then it just ended. I can see that the author wanted to makeapoint, with the ending of the novel, blaming humans, especially the old conservative generation for the current turn of events but I can also see that he was getting bored with his own novel and decided to end it prematurely. This to me felt likeawaste, but then again this isapersonal opinion.
Aye Mya Mya Naing – September 2, 2020
ဆရာဗြိရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသရော်စာပါပဲ။ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးကိစ္စတွေမဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်ကို ကြိုသရော်ထားတဲ့အတွေးတွေက အံမခန်းပါပဲ။ပေါက်ကရ ကိုချက်ကျလက်ကျတွေးရေးထားပြီး တစိမ့်စိမ့်ခွီရမယ့်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။